स्थानीयवासीको गुनासो "पुल निर्माणको काम सुस्त भयो" » खबरहरुको एउटै केन्द्र
स्थानीयवासीको गुनासो “पुल निर्माणको काम सुस्त भयो”
आईतवार, असार ४, २०७४ १३:२९ मा प्रकाशित !
तेह्रथुम, असार ४ गते । जिल्लाको दक्षिण–पश्चिमी क्षेत्रमा अवस्थित छथर गाउँपालिकालाई सदरमुकाम म्याङ्लुङसँग जोड्ने म्याङ्लुङ–ओख्रे सडकखण्डको लम्बु खोलामा मोटरेवल पुल निर्माणको काम ढिलाइ हुँदा स्थानीयवासीलाई सास्ती भएको छ । एक वर्षअघि नै सक्ने गरी पुल निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले सुस्त गतिमा मात्रै काम गरिरहेको छ ।
ठेकेदार कम्पनीका कारण पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको ओख्रेका तुलसी तिगेलाले भन्नुभयो ।
यहाँका बासिन्दा पहिले धनकुटाको सिधुवा पुगेर मात्र कोसी राजमार्गबाट वसन्तपुर हुँदै सदरमुकाम म्याङ्लुङ आउने गरेका छन् । सडक निर्माण भए पनि खोलामा पुल नबन्दा अर्को जिल्ला घुमेर सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयवासी गुनासो सुनाउँछन् ।
पुल नहुँदा सदरमुकाममा रहेका सरकारी कार्यालयका सेवा सुविधा लिन बासै बस्ने गरी जानुपर्ने अवस्था रहेको हमरजुङका वमप्रकाश लिम्बूले बताउनुभयो ।
पुल बनेपछि सो सडकखण्डबाट ओख्रे, सुदाप, फाक्चामारा, पञ्चकन्या, हमरजुङ, आङ्दिमलगायत गाउँका बासिन्दा लाभान्वित हुनेछन् । हाल यहाँका बासिन्दा सिधुवा–शुक्रबारे सडक भएर पूर्वी तराई र सदरमुकामतर्फ आवतजावत गर्छन् ।
PREVIOUS POST Previous post: पहिरोको कारण नारायणगढ–मुग्लिन सडक अवरुद्ध
NEXT POST Next post: मा के का वडाध्यक्षका उम्मेदवार बेपत्ता
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते आईतवार, असार ४, २०७४ १३:२९
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस आईतवार, असार ४, २०७४ १३:२९
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण आईतवार, असार ४, २०७४ १३:२९
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी आईतवार, असार ४, २०७४ १३:२९
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? आईतवार, असार ४, २०७४ १३:२९